Diyaaradda Condor ee Jarmalka ayaa Casriyeysay Maraakiibtii 16 Diyaaradaha cusub ee Airbus A330neo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Condor ee Jarmalka ayaa Casriyeysay Maraakiibtii 16 Diyaaradaha cusub ee Airbus A330neo
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Go'aanka Condor ee ah in la casriyeeyo maraakiibtiisii ​​dheerayd ee A330neos wuxuu dejin doonaa jaangooyo cusub oo ku wajahan duulimaadyada xagga duulimaadyo waara.
Diyaaradda Jarmalka Condor Flugdienst GmbH waxay cusboonaysiisaa maraakiibteeda muddada dheer.
Condor wuxuu iibsan doonaa toddoba diyaaradood oo ah Airbus A330neo.
Condor wuxuu kiraysan doonaa sagaal diyaaradood oo kale oo ah Airbus A330neo.
Diyaaradda Jarmalka Condor Flugdienst GmbH ayaa dooratay Airbus A330neo si ay u cusboonaysiiso maraakiibteeda dhaadheer iyada oo qorshuhu yahay in la soo bandhigo 16 diyaaradood oo ah noocaan cusub oo ka tayo badan. Shirkaddu waxay la saxiixatay Airbus heshiis ay ku iibsanayso toddoba Airbus A330neo, waxayna damacsan tahay inay kirayso sagaal kale.
Condor waa diyaaraddii ugu dambaysay ee dalbanaysa diyaaradda casriga ah ee Airbus ee A330neo, taasoo keenta isbeddel xagga waxqabadka iyo dhaqaalaha ah. Shirkaddu waxay ku shaqayn doontaa A330neo shabakaddeeda dheer ee caalamiga ah ee Ameerika, Afrika, Kariibiyaanka iyo Aasiya.
“Condor wuxuu ku fiican yahay inuu si macaash leh uga shaqeeyo waddooyin badan oo uusan side kale awoodin; waxaan ku hanweynahay inaan aragno diyaarad rabta sida Condor oo u dooranaysa tikniyoolajiyadeena ugu dambeysa A330neo inay noqoto diyaaradda xulashada, iyadoo la dhisayo mustaqbalka maraakiibtooda ballaaran iyadoo la raacayo dabagalka joogtada ah ee kharashyada hawlgalka ugu hooseeya iyo raaxada rakaabka, ”ayuu yiri Christian Scherer, Madaxa Ganacsiga Airbus Sarkaal iyo Madaxa Caalamiga ah. Iyada oo la kaashanayo diyaaradaha A320 iyo A330neo oo dhinac ah, diyaaradda ayaa ka faa'iideysan doonta dhammaan dhaqaalaha guud ee labadan badeecadood ee qiimaha leh, oo leh dabacsanaan la galiyay si wax looga qabto suuqyada cusub iyo kuwa hadda jira oo leh diyaarad sax ah oo sax ah.
Christian Scherer wuxuu raaciyay, “A330neo ayaa mar kale ku guuleysatay tartan dhammaystiran, maadaama ay ku heshay inta badan qiimeynta tartammada saddexdii sano ee la soo dhaafay. Go'aanka Condor ee ah in la casriyeeyo maraakiibtiisii ​​dheeraa ee A330neos ayaa sidoo kale dejin doona halbeeg cusub oo ku saabsan dariiqa diyaaradda ee ku aaddan duulimaad waara. Waxaan u mahadcelinaynaa oo u sacbinaynaa Condor xaqiijinta qiimaha tartan ee A330neo. ”